Excel waa qalab awood leh, oo awood u leh inuu abuuro Dashboards aad u dhammaystiran, muuqaal ahaan xirfadlayaal, Oggolaanshaha cusboonaysiinta firfircoon ee xogta iyo walxaha isdhexgalka oo aad u horumarsan (garaafyada, qaybinta, maaraynta bogag badan).
Liiska koorsadan, waxaad ku baran doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u abuurto nooca Dashboard-ka:
– Sida loo diyaariyo xogta abuurista dashboard-ka?
- Isku-dubarid jaantus garaafeed gudaha Excel
- Isticmaalka PivotTables iyo PivotCharts si ay u muujiyaan xogtaada
- Si firfircoon u muuji xilliga isbarbardhigga KPI-gaaga
– Ku dar filtarrada iyo qaybaha muuqaaladaada
- Ku samee menus gudaha dashboardkaaga
Si aan u barano waxaas oo dhan, waxaan ku tiirsanaan doonaa xogta ganacsiga ee dukaamada Google. Tani waxay noo ogolaan doontaa inaan dhisno dashboard-ka waxqabadka ku salaysan xogta dhabta ah.
Qayb “Jimicsi” ah ayaa la qorsheeyay dhamaadka koorsada si aad u tijaabiso aqoontaada.
Waxaan rajeynayaa inaan ku arko qaar badan oo idinka mid ah koorsadan! ?
Abuur Dashboard tayo sare leh oo heer sare ah! Janaayo 19th, 2022Tranquillus
READ Miyuu heshiis wada jir ah oo bixiya dheefaha mushaharku dib u noqosho ku dabaqaa shaqaalaha la eryey ka hor intaan la saxiixin?
horeXirmada xiriirka luqadda bari: Shiine
socdaKu samee khariidad firfircoon leh Excel wax ka yar 1 saac!